Hemp Archives • Bogga 5 ee 6 • Dawooyinka Inc.eu
cannabis, CBD, Caafimaadka, Sharci dejinta & Sharci dejinta
Uumiga uumiga wuxuu ka baxsan yahay hababka dhaqameed ee isticmaalka xashiishka. Muxuu caanku u caan baxay? Waxaa jira siyaabo badan oo ...
Saamiyada & Dhaqaalaha, cannabis, CBD, Sharci dejinta & Sharci dejinta
Kahor intaanan guda galin dooda ku saabsan maalgashiga kaydka saliida ee CBD (ama cannabidiol), waxaa laga yaabaa inay waxtar leedahay in marka hore la fiiriyo…
Markii ugu horaysay ee caddayn ah in cannabis la cabbo ayaa hadda la helay xabaalaha qadiimiga ah ee Shiinaha
Raadinta haramaha xoogga leh ayaa lagu aqoonsaday walxo alwaax ah oo 2500-sano jir ah oo lagu aasay dadka ku nool hareeraha Wadada Silk Road ...
Dhawaan waxay umuuqataa daadka dhamaan noocyada waxsoosaarka CBD. Waxaa la muujiyay in CBD sida ...
Ma lagugu xiray socdaal la leh saliida CBD, mise waxaad u safri kartaa CBD dhibaato la'aan?
Dhawaan haweeney ayaa lagu xiray Disney World (Ameerika) iyada oo sidday walax mamnuuc ah: saliida CBD, oo lagu eedeeyay ...
Bixiyaha Organik CBD Medihemp wuxuu soo saari doonaa bog cusub
Muuqaal cusub & dareemid cusub soosaaraha CBD-ga dabiiciga ah Medihemp. Medihemp, oo ah soosaarahii ugu horreeyay ee CBD-ga ah ee ka soo baxa Austria, ayaa bilaabay ...
U wac Canna-Bees. Sida cannabis waxay u caawineysaa shinnida iyo waliba.
Maanta waa 16-ka Maajo, Maalinta Beeraha Adduunka. Ama maalinta shinni. Xaaladdan oo kale shinni iyo xashiishad.…
Qoraaga ayaa adeegsanaya khibradeeda waxayna qortay buuga 'Cannabis for Dummies' si ay xashiish uga dhigto mid 'raaxo leh'
"Cannabis for Dummies" ayaa loo heli karaa buug ahaan laga bilaabo Talaadada. Qoraaga iyo halyeeyga xiriirka xashiishka Kim Ronkin Casey wuxuu arkaa fursado iyo fursado waaweyn ...
Haddii aad rabto inaad wax badan ka barato dhirta xashiishka ee cannabis oo aad dareento inaad booqato nooc kale oo matxaf ah, tag ...
Saamiyada Aurora Cannabis (NYSE: ACB) ayaa duurjoog noqday sanadka 2019. Saamiga soo saaraha xashiishadda ee hormuudka ka ah sanadkan waa…
cannabis, ka dhiman, Wargeysyada caalamiga ah ee cannabis
Haddii aad si joogto ah u isticmaashid xashiishad, mararka qaarkood ama weligaa, fursadaha aad ugu yaraan maqashay ...
Cannabis kuma koobna oo keliya dawladaha sharciga ah. Xaqiiqdii, CBD hadda waxay ku dhowdahay meel kasta oo ah qaab la cuni karo, ...
Warshadaha xawliga ku socda ee xawliga ku socda waxay ka dhigan yihiin diiwaanka lacagta ee Nederland. Daraasiin shirkado Dutch ah oo ka shaqeeya waaxda dhirta ayaa kasbaday 'boqollaal milyan oo yuuro' suuqan cusub, ...